Imbali yeManchester United kunye neMaltas ekwamkeleni iindwendwe ngempumelelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMalta Breaking » Imbali yeManchester United kunye neMaltas ekwamkeleni iindwendwe ngempumelelo
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
L ku-R - uBryan Robson kunye noDenis Irwin © NdwendwelaMalta / Manchester United
Abameli baseManchester United uBryan Robson noDenis Irwin (iintsomi) babhabhela eMalta kweli hlobo ukuze bazibonele ngawabo amaqithiqithi aseMalta, kwaye kutheni kusoloko kukho izinto ezininzi ekufuneka ziphononongiwe.
Ubambiswano lwendawo ekuyiwa kuyo ngokusesikweni phakathi kweNdwendweMalta kunye negama lebhola ekhatywayo leManchester United libhengeza imbali ende eyimpumelelo yeMalta ekubukeni iindwendwe.
Iintsomi zeklabhu ezinje ngoDenis Irwin noBryan Robson lelinye inyathelo eliya phambili ukubonisa iziqithi zaseMalta kwihlabathi liphela.
Olu luhlu lweenxalenye ezine lubabona bezama isandla sabo kwimidlalo yamanzi, ukuvuthela iiglasi, kunye nokupheka ngelixa bejonga indawo.
Oko kwaqala njengohambo oluqhelekileyo kuguquke kwaba yinto entle njengoko amaqhawe amabini acelwa umngeni kwimisebenzi ebekwe ngabadlali beManchester United: uPaul Pogba, uBrandon Williams noLee Grant.
Kwisiqendu sokuqala, ababukeli bayabona iintsomi bazame ithamsanqa labo kwimidlalo yezamanzi eComino, ngaphambi kokuba ezinye iziqendu kuthotho lubabone bezama isandla sabo ukuvuthela iglasi eMdina, kunye nokupheka eMyuziyam yaseMaritime, kodwa hayi ngaphambi kokujonga ezinye izinto eValletta, bema ukukhawuleza ngokukhawuleza kweMalta, kunye nokuhlola iMalta National Aquarium.
“Ndicinga ukuba iMalta intle! Qho xa ndisiza apha, ndothuswa bububele babantu, iindawo ezinkulu kunye nokutya okumnandi, "utshilo uBryan Robson, noDenis Irwin wongeza ukuba" kuvakala kukhethekile ukwazi ukuba iMalta neManchester United zinembali ethi ibuyela emva kumashumi eminyaka, enokukhula kuphela ukusuka kumandla ukuya kumandla, kwaye oko kunokuthetha ukuba sifumana ithuba lokuhlala sinesizathu sokuba phakathi kwabahlobo bethu baseMalta, abaphantse babe ziintsapho zethu. ”
Kuya kubakho umntu ophumeleleyo kuphela ekugqibeleni, kwaye uGozo wayengoyena mntu ugqibelele ukubhengezwa ngu-Hon. UClayton Bartolo, Umphathiswa Wezokhenketho.
“Intsebenziswano yethu esesikweni phakathi Ndwendwela iMalta kunye nebhola ekhatywayo yebhola ekhatywayo iManchester United isenza ukuba siveze imbali ende ephumeleleyo yaseMalta ekubukeni iindwendwe. Ukufika kwamabali amabini eklabhu afana noDenis Irwin noBryan Robson lelinye inyathelo eliya phambili ukubonisa iiMaltese Islands kwihlabathi liphela, ”utshilo uMphathiswa wezoKhenketho noKhuselo lwaBathengi uClayton Bartolo.
“Bekululonwabo kuTyelelo lwaseMalta ukwamkela uBryan noDenis ngexesha lokuhlala kwabo eMalta, njengenxalenye yobambiswano lwendawo esisemthethweni esinayo neManchester United. Olu bambiswano lubaluleke kakhulu kwiGunya lezoKhenketho laseMalta, nakwiNdawo yokundwendwela yaseMalta, ene-United Kingdom njengenye yeemarike zayo ezinamandla, ethi yona ibonakale kwilizwe liphela laseManchester United, ngaphaya kwemida yaseYurophu, kubandakanya US, ”utshilo uGqirha Gavin Gulia, uSihlalo we-MTA.
Iziqithi ezinelanga zaseMalta, embindini woLwandle lweMeditera, likhaya kuxinaniso oluphawuleka kakhulu lwelifa lemveli elakhiweyo, kubandakanya ubuninzi obuphezulu beeNdawo zeLifa leMveli le-UNESCO kulo naliphi na ilizwe. Valletta, eyakhiwe Knights abanekratshi of St. John, yenye yeendawo UNESCO kunye European Capital of Culture for 2018. Malta patrimony kuluhlu lwamatye ukusuka endala izakhiwo ilitye emi-free ehlabathini, ukuya kwenye uBukhosi baseBritani Ezona nkqubo zinamandla zokuzikhusela, kwaye kubandakanya umxube otyebileyo wolwakhiwo lwasekhaya, lenkolo kunye nolwezomkhosi ukusuka kumaxesha amandulo, aphakathi kunye nasekuqaleni. Ngemozulu entle enelanga, iilwandle ezinomtsalane, ubomi obuchumayo kunye neminyaka engama-7,000 yembali ebangel 'umdla, kuninzi ekufuneka ukubonile kwaye ukwenzile. utyelelo.com
NgoSeptemba 23, 2021 kwi-09: 23
Ukuba inkampani yakho icwangcisa ukwandisa ukusebenza eMalta, uya kufuna ukufuduka. Isiqithi besisembindini wembali yaseMeditera kunye nenkcubeko kangangeenkulungwane, kwaye singonwabela kwakhona ngoku kuluhlaza.